Ndị na-ere ahịa: Ghọta akparamagwa ndị a na etiti Buzụ ahịa Britain | Martech Zone
I huru ihe m mere ebe ahu? Nke a Midwester ji okwu Bekee mee ihe omume kama omume. Naanị m chọrọ igosi onye ọ bụla otú m si n'ụwa ma ọ bụ. Agabeghị m United Kingdom n'agbanyeghị agbụrụ ndị Scotland na nke Britain na mama m n'akụkụ ezinụlọ. (Lee nke ahụ? M mere ya ọzọ!)
Ọ dị mma, ọchị (doh!), Nke a bụ ụfọdụ nnukwu ozi weghaara CM Ika. Ekwenyere m n'ezie na nke a nwere ike bụrụ nkọwapụta ziri ezi banyere omume ịzụta obodo mepere emepe ebe a na United States.
Ghọta omume ndị ahịa abụghị naanị ịchọta ngwaahịa ma ọ bụ nkwado onyinye ịrịọ igwe mmadụ. Site na nrịba ama nke onye ahịa, ọ kwesịrị ịbụ maka ịdata nkọwa dị ka ihe mere onye ahịa ji eme ụzọ ụfọdụ na a ụlọ ahịa onyinye pụrụ iche, otu ndị mmadụ si ekerịta ozi na ibe ha, na otu mmetụta ọdịbendị ma ọ bụ nke ọha mmadụ na-arụ ọrụ n'ịkpụzi echiche ha. Max Baumber
Nke a bụ ọtụtụ agwa ị ga-eburu n'uche ka ị na-emepe atụmatụ ịre ahịa gị na mba ọzọ (yana ọbụlagodi ebe a):
Ndị ahịa UK na-eguzosi ike n'ihe - jide data ha, kpọtụrụ, ma hazie mbọ ịre ahịa.
Ndị na-azụ ahịa na UK Bara Uru, Nyefe A Pụrụ elidabere na Nweghachi Ngwaahịa - dozie nsogbu nnyefe ma nyeghachi nkwụghachi ụgwọ ka ịba ọgaranya na ntanetị n'ịntanetị.
Ndị ahịa ahịa UK na-enyocha ọnlaịnụ - hụ na ndị ahịa nwere ike ịchọta ozi gbasara ngwaahịa gị n'ịntanetị site na ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana saịtị zuru ezu gbasara ngwaahịa.
Slọ Ahịa Dị Oké Mkpa na Brit si Buzụta njem - Gwakọta ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na nke offline maka ahụmịhe ịzụ ahịa na enweghị ntụpọ na ụgwọ ọrụ ịzụrụ na nchekwa na iguzosi ike n'ihe.
Ihe omuma ahia nke ndi ahia na ikike iji hu Ngwa ahia di nkpa - Nye ndị ahịa ezigbo ụlọ ahịa site na itinye ego na ọzụzụ na ịzụlite ndị nnọchi anya ụlọ ahịa.
Millennial Brits na-achọ nkwado sitere na Netwọk mmekọrịta - Mee ka akara ngosi gị dị na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Shozụ ahịa ekwentị bara uru maka otu ndị ahịa na-eto eto - Melite ahụmịhe mkpanaka gị na ebe nrụọrụ weebụ iji mee ka ọnụ ọgụgụ ndị na-eto eto na-agbanwe.
Nke a bụ ihe ọmụma mara mma, Ndị Brits 'Na-azụta Omume na Àgwà Ndị na-ere Ahịa kwesịrị ịma.
Tags: iweBritishịzụ omumeịzụ omumena ụlọ ahịaakparamagwa izu iriomume ịzụ ahịa mkpanakaịzụta nkwadoomume ire ere ahịashoppingnkwado mgbasa oziukuk ndị ahịauk iguzosi ike n'ihe ịzụ ahịaUnited Kingdom